सुहाना : अभिनेत्री झरनाकी डुब्लिकेट ! | Screennepal
सुहाना : अभिनेत्री झरनाकी डुब्लिकेट !
२०७५, १८ जेष्ठ शुक्रबारscreennepalhot news, Movie0
परिवारभित्रै निर्माता, निर्देशक र हिरोइन
यहाँ तस्बिरकी युवती हुन् सुहाना थापा । यतिले उनको परिचय नखुल्न पनि सक्छ किनकि, नेपाली फिल्म क्षेत्रका निम्ति नयाँ अनुहार हुन् । तर, अभिनेत्री तथा निर्देशक झरना थापालाई देखिरहनेले पक्कै चिन्नेछन्, ‘यिनी त झरना जस्तै छिन् ।’
हो, सुहाना झरनाजस्तै छिन् । अनुहारको मोडलदेखि लिएर जिउडाल अनि हाँसोसमेत झरनासँग मिल्छ किनकि, सहाना उनै झरनाकी सुपुत्री हुन् । तर, अब यति भनेर मात्र पुग्दैन उनलाई । उनी फिल्ममा डेब्यु गर्दैछिन् । त्यसैले अब उनी ‘अभिनेत्री सुहाना थापा’ बन्दैछिन् ।
आमा अर्थात अभिनेत्री एवं निर्देशक झरना थापाले निर्देशन गर्न लागेको चलचित्र ‘ए मेरो हजुर–३’ मा सुहाना पछिल्ला स्टार अनमोल केसीसँग डेब्यु गर्दैछिन् । ‘ए मेरो हजुर–२’ उनै झरनाको पछिल्लो ‘हिट’ फिल्म हो, जसको सिक्वेल झरनाले बनाउन लागेकी हुन् ।
अभिनयमा निरन्तर सफलता हासिल गर्दै आएकी झरना ‘ए मेरो हजुर–२’बाट निर्देशनमा पनि हौसिएकी छन् । ‘ए मेरो हजुर’ झरनाको होम प्रोडक्ट हो । जसको निर्माता उनकै पति सुनिलकुमार थापा हुन् ।
‘ए मेरो हजुर–३’बाट भने छोरी पनि थपिएकी छन् । यो फिल्ममा झरना निर्देशक, उनका पति निर्माता र छोरी हिरोइन हुनेछन् । अनमोललाई भने यस फिल्मका लागि निकै महँगो पारिश्रमिक दिएर थापा परिवारमा भित्राइएको छ ।
‘ए मेरो हजुर–३’ सुहानाका लागि चुनौती र अवसर बन्नेछ किनकि, उनी यसै फिल्मबाट डेब्यु गर्दैछिन् । अर्को कुरा उनको को–स्टार अनमोल फिल्ममा जमिसकेका छन् । एक स्टारसँग डेब्युमै ‘रोमान्स’को अवसरलाई सुहानाले चुनौतीका रुपमा मात्र नलिइ ‘सु–अवसर’ मान्नु पर्ने हुन्छ । (तस्बिर मेरो फिल्मबाट)
Previous Postराजधानीमा ‘पढ्नलाई प्रेरणा’ नारासहित पुस्तक प्रदर्शनी Next PostVideo : अम्बिकाको शब्दमा अञ्जुको त्यो मन